शेखर कोइरालाको भाग्योदय हुने संकेत, देउवालाई हराउन भारत लाग्यो हात धोएरै ! – Points Nepal
शेखर कोइरालाको भाग्योदय हुने संकेत, देउवालाई हराउन भारत लाग्यो हात धोएरै !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २७, २०७८ समय: ७:१४:०५
नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवालाई फेरि सभापती हुन नदिन भारत हात धोएरै लागेको चर्चा चलेको छ । काठमाडौँमा जारी नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन थप रोचक र पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला भारतले शेखर कोइरालालाई जिताउन लागि परेको खबर बाहिरिएपछि देउवा झस्किएका हुन् ।
काग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउँला भन्ने कुरालाई देश र विदेशमा चासो बढेको छ । संस्थापन पक्षले शेरबहादुर देउवालाई उमेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ भने उनलाई सोही पक्षबाट विमलेन्द्र निधी र कल्याण गुरुङले चुनौती दिएर उमेदवारी दिएका छन् । यो पटक कृष्ण सिटौलाको टेको शुरुमै पाए पनि पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले देउवाको ढुकढुकि बढेको छ ।
अन्तिम आवरमा आएर रामचन्द्र पौडल सभापतीको रेस बाटै बाहिएका छन् , संस्थापान इतर समूह बाट शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले उमेदवारी दिएका छन् । सिंह र कोइरालाको उमेदवारी परे पनि संस्थापन इतरको आधिकारिक उमेदवारी शेखर कोइरालालाई मानिएको छ ।
रोचक पक्ष के छ भने कोइराला र देउवा प्यानल सहित प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् भने सिंहको प्यानलमा उपसभापतिका सुजाता कोइराला र महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै रहेका छन निधीले विना प्यानल सभापतीमा मात्रै उमेदवारी दिएका छन् ।
कोइराला , निधी र सिहंको टिममा जसरी उमेदवारी परेका छ यसले काग्रेस महाधिवेशन थप रोचक र रहस्यमय बन्दै गएको छ । सिंह र निधीलाई सभापतीमा भोट हाल्नेहरुले अरु पदाधिकारीमा कता मत दिन्छन् भन्ने निकै चासोको बिषय बनेको छ । देउवा बाहेकका उमेदवारलाई सभापतीमा मत हाल्नेहरुले पदाधीकारी र केन्द्रिय सदस्यमा कोइराला प्यानलमा भोट हाल्ने अनुमान गरिएको छ ।
१३ महाधिवेशनमा देउवाका दाहिने हात भएर सहयोग गरेका विमलेन्द्र निधी यो पटक सुरु देखीनै देउवा विरुद्धको मुभमेन्टमा लागेका छन् । रामचन्द्र पौडललाई सर्वसहमत सभापती बनाउँने हो भने आफुले उमेदावारी नदिने बताएका निधी अन्तिममा देउवा भन्दा कोइराला तिरै ढल्किने अनुमान गरिएको छ ।
प्रारम्भिक छाँटकाट हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचन बाट काग्रेसले नयाँ सभापती पाउँने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ५१ प्रतिशत मत नल्याएको अवस्थामा पुनः मतदान हुने छ । पहिलो र दोस्रो हुने उमेदवार विच मात्रै दोस्रो चरणमा फेरी प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा देउवा र कोइरालामा दोस्रो राउण्डमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालका राजनितीक दलहरुमा विदेशी चासो र प्रभाव नांगो रुपमा हुने त सर्वविदीतै छ यसमा पनि नेपाली काग्रेसमा यो चर्को रुपले हुने राजनितिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । दोस्रो राउण्डमा कोइराला र देउवा विच प्रतिष्पर्धा हुँदा कुन शक्तीले बाजी मार्न सक्छ भन्ने यसै भन्न नसकिने जानकारहरुको मत रहेका छ ।
मुख्य र निर्णायक शक्ती मानिएको इण्डीयाले यस पटक शेखर कोइरालालाई झ्याप्पै काँध हालेको चर्चा काग्रेसी वृतमा चलेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बखत सो निर्णय गर्ने बेला रहस्यमय तरिकाले केन्द्रिय कमिटी बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका कोइरालालाई इण्डीयाले हरियो झण्डा देखाएको छ ।
विमेलेन्द्र निधीलाई देउवालाई चुनाव हराउँनैका लागी संस्थापन टिम बाट थुतेर अलग उमेदवार बनाइएको चर्चा पनि चलेका छ । देउवालाई अमेरिकाको साथ र आर्शिवाद रहेको बताएको छ । कोइरालालाई इण्डीयाले काँध हालेको राम्रो सँग बुझे पछि देउवा नराम्रो सँग झस्किएको बताइएको छ ।
Last Updated on: December 13th, 2021 at 7:14 am